Izimfihlo ezibalulekile ze-gait enhle
Bonke abesifazane, namadoda, bayazi ukuthi ukuhamba okuhle kufana nekhadi lebhizinisi litshela abanye ukuthi uphumelele, uqiniseka futhi unhle. Ngaphezu kwalokho, awukwazi ukunciphisa ukwabelana komusa, okukunikeza ukuhleleka okuhle.
Namuhla ngifuna ukukhuluma ngezimfihlo ezibalulekile ze-royal gait enhle. Ufuna ukubonwa ngumuntu - sebenzisa imizuzu embalwa ufunde iseluleko sami.
Kodwa okokuqala ake sikhulume ngamaphutha ayisisekelo ekugcineni. Uzobe usendaweni emgwaqeni - bukela abadlula-by-uzobona ukuthi kubonakala kanjani kumnandi.
- Shiya. Ibukeka bubi kakhulu, ibamba iso bese inikeza umnakekeli ukuba abukeke engaphephile.
- Ukuhamba okukhulu. Ngokuvamile abesifazane, naphezu kokuthi bangabuthakathaka futhi banethenda, ngenza umsindo ude kakhulu ekuthekeni kalula ngezithende.
- Imilenze egobile. Amazwana ayadingekile - ayesabeka.
- Ukuxhuma. Lokhu kunikeza owesifazane okungenani iminyaka engama-40 kusuka phezulu. Awusona ugogo omdala, futhi uma uzizwa kanjalo, akukho lutho lokugcina umhlane wakho uqonde - kulesi sithombe ukuzingela emuva kulungele kakhulu!
- Isinyathelo esikhulu noma izinyathelo ezisheshayo zamatshe. Futhi enye icala libukeka lihlekisa kakhulu futhi lihlangene noyedwa wesifazane, othembekile.
Indlela yokuhamba ngendlela efanele? Maye, ukuhamba okuhle akunikezwa kusukela ekuzalweni - lokhu kungumphumela wokuzikhandla wena ngokwakho.
Kumele kuqashelwe ngokushesha ukuthi ukubuka okubonakala ngokuphindaphindiwe embukisweni wefashini akuhlangene nohambo lwansuku zonke. Ake ucabange owesifazane ohambahamba ehhovisi noma esitolo nge-model. Kuyinto ehlekisayo. Ukudla okungajwayelekile kungabi kuhle kakhulu.
Qaphela: ukulungiselelwa okunembile kwezinyawo, ukunyakaza kwesandla, ukuma. Futhi, kubaluleke kakhulu, izicathulo ezikhululekile.
Umzimba womzimba kufanele uphambuke kancane emuva, emuva ngqo, esifubeni nompristi - ubonise (lutho - bavumele bahlole, lokhu kusekugcineni), uma uhamba - izinyawo zibekwa emgqeni owodwa, kuyilapho amasokisi ebuka ngaphandle. Usayizi wesinyathelo uthathwa njengokujwayelekile uma ungadluli ubude bonyawo olwandiswa yinye nesigamu. Isinyathelo sibhekwa kusukela emlenzeni womlenze owodwa kuya kwesithende sesibili.
Thenga isibuko esikhulu uma kungenjalo, futhi uthathe izicathulo ezimbalwa zezicathulo ezahlukene ezizithende eziphakeme neziphansi. Hamba ukuhlangabezana nesibuko ngendlela ohamba ngayo ngokujwayelekile, qaphela yonke imininingwane, bese uzibuza-like, ukuheha? Qaphela ukubeka imilenze, emuva futhi lapho amehlo akho abukeka khona.
Manje ukuthi ucabangele zonke amaphutha, hamba ngakwesokudla, ubukhosi. Phuma, uthathe umoya ojulile uzizwe njengomuntu onenhlamvu enkulu! Ekuqaleni kuyoba nzima futhi kungabonakali - kuyindaba yesikhathi, khona-ke uzoyisebenzisa futhi imisipha izoqeqeshwa - labo abangazange bahlanganyele ngaphambili.
Ungazami ukuphinda uphinde uphinde uhlaziye. Ukunyakaza kwabo kwe-hip empilweni yansuku zonke kuzobukeka kungenangqondo. Kodwa! Hambisa imilenze yakho ngomusa nangokungcebeleka, uchaza abayisishiyagalombili endizeni ehamba phambili. Qinisekisa ukuthi i-gait izuze ubulili kanye nomthinta obala wobulili . Ungaqeqesha ekhaya, phambi kwesibuko, ngezicathulo ezahlukene. Okokuqala zama ukudweba izintambo eziyisishiyagalombili, kodwa amahlombe namanje! Khumbula lokhu - kukhona imfihlo encane kulokhu.
Uma ubeka unyawo lwakho phambili, vula u-hip kancane phambili nangaphandle, bese uphinda ngomunye umlenze. Kodwa ungathathi kakhulu! Amahlombe ayanyakaza futhi awudingi ukuzulazula izandla zakho. Kukhona ukuzivocavoca okuhle kakhulu - ufaka incwadi ekhanda lakho futhi usebenzise ukuhamba - lokhu kuzokuvumela ukuba uzuze umzimba ongenampilo ngenkathi uhamba. Ngaphezu kwalokho, ngokuziqhenya okuziqhenyayo, yenza umzimba ukuze uqinise umgogodla. Ngaphezu kwalezi zivivinyo, engeza izivivinyo zokuzethemba kwezinyawo zakho, ngisho nasezithende eziphakeme kakhulu. Ngokwemvelo, umphumela uzobonakala ngokushesha - ngesonto ngo-2-3, kodwa uzobona indlela ozoyithola ngayo ibe mnandi kakhulu, futhi isisu esisodwa sasizikhukhumeza.
Yini enye izimfihlo ezibalulekile ze-gait enhle?
Ngesinye isinyathelo, amasokisi kufanele abheke ngaphandle, ngaphandle kwalokho umphumela we-clubfoot uzokwenziwa. Asikho isidingo sokugijima ezithendeni zakhe! Ngisho noma usuphuzile umhlangano obalulekile. Ukugijima ezintendeni zentombazane njalo kugoba imilenze yakhe, futhi kubonakala kubi kabi. Ungazami ukugqoka izithende ezinkulu uma imilenze yakho ingaqondile ngqo. Ungabheka okumangalisa, kodwa imilenze yakho enezinwele ezinqamule iphuma yonke into.
Ungabheke phansi - ukuze wenze i-gait ibonakale iqinisekile futhi inhle, i-angle phakathi kwe-chinku nentamo kufanele ibe okungenani ama-degree angu-90. Ukuze ubone ukuthi uya kuphi, kwanele ukuthi ngezinye izikhathi ubheke phansi, kodwa ngaphandle kokunciphisa ikhanda lakho!
Ukunqunywa ngokunyakaza kwezandla. Uma beqhubeka phambili kancane - i-gait ithola inzuzo yokusebenza kahle, emuva - ubulili kanye nobulili. Phinda ufunde kahle bese uthola indawo ephakathi, ukuze ungaboni kahle.
Futhi ngaphezulu. Ungakwazi ukugubha izinyathelo zakho ngaphezu kokujwayelekile ngaphambi komthandekayo wakho, eklabhu noma ekudlela. Kodwa ungalokothi ubambe izandla emaphaketheni akho - kukunika ukunganaki, kungani uyayidinga? Uma unamahloni ngempela, uthwala isikhwama sakho futhi usibeke emgqeni wakho ugobile ku-elbow. Lokhu kuzobukeka kunhle kakhulu futhi kunomfazi.
Ngokwemvelo, zonke lezi zeluleko akuzona isiqondiso sesenzo - ngokuzumayo unayo ukuzalwa komusa we-Panther? Uma kungenjalo, zama ukuzisebenzela. Imiphumela ozoyibona ngokushesha - futhi ngokuqinisekile iyokujabulisa. Ukunakwa kwabantu, ekuboneni - uhlobo luni lomfazi olungathandi ngalo. Vumela isibuko sibe umngane wakho osondelene, kuphela kube nomgomo kuwe.
Izindlela ze-cosmetology ye-hardware ezinkampanini zokunakekela ubuso nobuso
Dlulisela esikhathini esidlule: ukwakheka kwe-matte kubuya esimweni
Uyini ubuhle beqiniso bomuntu?
Indlela yokuhle kakhulu
Indlela yokubuyisana ngokuvumelana namaholide
Imemori yobuntwana: Izitayela zezinwele ezinezinsimbi - i-autumn trend-2016
Amaqiniso angu-7 mayelana nokuhlinzekwa kweplastiki, okuyinto owesifazane ngamunye okufanele azi
Indlela yokukhetha usuku lomshado ngo-2015
Ukuvumelanisa kwe-Autumn: Iqoqo le-T & B Base 2016 ngaphandle kwesikhathi
Izisekelo zokuphila okunempilo: ukunyakaza kanye nempilo
Isimo se-Halloween izingane, intsha, abafundi kanye nentsha. Izimo ezithakazelisayo nezesabekayo zeholide i-Halloween esikoleni
Izinkukhu zezinkukhu ku-jam glaze
Lily of the Valley - silungiselela ukuphoqa
Othandwayo oshadile - amaminithi kanye nama-pluses
Kuthiwani izingubo ezivamile?
Ukufunda ukupheka amakhekhe amakhemikhali amakhemikhali: zokupheka ngesithombe sezimpahla ezimnandi nezomnandi eziphekiwe
Ukwelashwa kwe-brutal izilwane ezifuywayo
Snowman: indlela yokwenza i-snowman ephepheni ngezandla zakho